Red Hat Inowedzera .NET Core kune Yayo Cloud Mifananidzo uye OpenShift Midziyo | Linux Vakapindwa muropa
Zvisinei nemufananidzo uyo Microsoft ine munzvimbo zhinji, chokwadi ndechekuti mumakore achangopfuura kambani yeRedmond yakaratidza nzira yakakosha yepasirese software yemuenzaniso, semuenzaniso kubatana nekernel pachayo. GNU / Linux kana kunyange kuburitsa yayo .NET tekinoroji pamwe neayo akati wandei ayo maturusi, senge Visual Studio o SQL Server.
Chaizvoizvo izvozvi tinogamuchira nhau kuti .NET Core ichave chikamu cheRed Hat ISO, zvese izvo zvinoshandiswa nemakambani pamakomputa avo epanyama kana chaiwo, pamwe neizvo zvinopihwa zvinoitirwa kushandiswa mugore. Kune avo vasingazive nezvehunyanzvi uhu, taura kuti ndiyo yakasvika muna Nyamavhuvhu 2014 kutsiva .NET uye iwanikwe pamapuratifomu matatu makuru.
Kwakadaro kwave kufambira mberi kwe..NET Core kuti mune ino pfupi nguva yaenda kubva ku13.000 APIs kana - Application Programming Interface, kana application programming interface- mushanduro 1.6, kusvika 32.000 mune yazvino vhezheni 2.0, uye kunyangwe zviri pachena kuti huwandu hauna kuenzana nemhando Kana ichokwadi kufambira mberi kwakawanda kwakaitwawo mune mikana yakapihwa kuti uwane kugona kukuru mukushandisa.
Red Hat ndiko kugovera kwekutanga kwe GNU / Linux yekupa .NET Core -iyo inouya nenzira yeYUM mapakeji kana makontena- asi zvirokwazvo mamwe ma distros anosvika munguva pfupi, uye kunyangwe izvi zvichionekwa nekutarisisa kunotaridzika nevazhinji vateveri vemahara software, chokwadi ndechekuti iko kudyidzana uku pakati pedu patinoda kushanda sisitimu uye Microsoft inogona kubatsira zvakanyanya se mikana inowedzera kune vanogadzira. Ndiko kuti kana uine multiplatform maturusi ekuvandudza iwe unogona kupa maapplication uye masevhisi emhando dzese dzevashandisi, asi uchiita iko kusimudzira kubva kuGNU / Linux, chimwe chinhu icho kune rimwe divi chinoshanda kune vese 'vakazvimirira' vagadziri nemakambani.
Mamwe ruzivo mu Red Hat
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Red Hat inowedzera .NET Core kune ayo gore mifananidzo uye OpenShift midziyo